Fanamby ara-tontolo iainana amin'ity taona ity sy ireo ho avy! | Fanavaozana maintso
Tomas Bigorda | | Mitsitsy angovo, tontolo iainana, Angovo azo havaozina, Tontolo_iainana, Teknolojia vaovao
Mihoatra noho ny teo aloha teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona dia niditra an-tsehatra isika ny tanantsika ny ho avy an'ny planeta araka ny ahalalantsika azy ary miatrika andiana fanamby amin'ny tontolo iainana isika.
Ho hitantsika manaraka izany hoe inona ireo fanamby ireo sy ny -TSAROTRA azon'izy ireo entina.
1 Olana lehibe amin'ny tontolo iainana
2 Fitomboan'ny mponina
3 Fanararaotana be loatra ny jono
4 Fanesorana ny harena an-kibon'ny tany
5 An-tànantsika ny hoavin'izao tontolo izao
Olana lehibe amin'ny tontolo iainana
Tao anatin'izay folo taona lasa izay dia vavolombelona maro isika no mahita izany NAMPITAHOTRA ny hoavintsika amin'ny maha-fiaraha-monina antsika:
fitomboana haingana ny mponina.
El harerahana ny harena an-kibon'ny tany.
Ny fanararaotana diso tafahoatra ny Harena fanjonoana sy ny sempotry ny ranomasina.
Mampitombo ny fandotoana ny tany sy ny rano.
Ny famongorana ny maro karazana.
Ny famoahana faobe an'ny entona entona trano fonenana nahatonga ny fiakaran'ny maripanan'ny tany.
Tamin'ny 30 Oktobra 2011 dia nihoatra ny 7000 lavitrisa mponina teto ambonin'ny planeta isika.
Tamin'ny 2016 dia efa nihoatra ny 7400 izy ireo ary ankehitriny dia efa mihoatra ny 7500 7.504.796.488 tapitrisa isika (XNUMX tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity araka ny Worldometers).
Raha ny vinavinan'ny vinavinan'ny ofisialy, amin'ny taona 2050 ary raha tsy misy fiovana dia azo inoana fa ho tratra ny 10.000 miliara.
Olona 10.000 miliara te-hihinana, hisotro, hiakanjo, hitsangatsangana, hamboly sns.
Izany dia mametraka tsindry amin'ny tontolo iainana sy loharanon-karena tsy mbola nisy toy izany. Ohatra iray amin'ny vokatr'io fitomboan'ny isan'ny mponina io tontolo iainana ananantsika izany amin'ny jono.
Fanararaotana be loatra ny jono
Toy ny culinary tsirony dia nitombo epicurean ary fanatontoloana, ny filan'ny sushi ary ny hazandranomasina ary ny trondro amin'ny ankapobeny dia nanjary manerantany.
Ireo firenena toa an'i Espana izay efa anisany trondro tena ilaina amin'ny sakafontsika, vao mainka nampitombo ity fanjifana ity ary vao mainka nampitombo azy.
Ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa no nahafahana nanao izany mihinana trondro vao na aiza na aiza eto amin'ny firenena. Saingy nitombo eran'izao tontolo izao io fironana io, ka nahatonga ireo andian-jono nanarato nankany amin'ny toeram-panjonoana izay lasa lavitra hatrany.
Ny olana dia misy fiatraikany amin'ny fahafahan'ny reproduction ny ranomasina ity predation ity, ka ny ambaratonga ambony indrindra ny trondro any amin'ny toeram-panjonoana rehetra eto an-tany.
Ity dia vokatra izay mitranga amin'ny fomba mitovy foana; rehefa mihabetsaka ny trondro any amin'ny faritra iray, dia mitombo ny famokarana trondro amin'io faritra io mandra-pahatongany amin'ny taha ambony indrindra aorian'ny fihenan'ny trondro ary tsy miverina any mahatratra ny farany ambony indray.
Tamin'ny 2003 dia efa nahatratra ny trondro farany azon'ny ranomasina eran'izao tontolo izao izy io. Izany no antony nitomboan'ny fiompiana trondro a alternativa ny fihenan'ny trondro any an-dranomasina.
Izany koa dia fanazavana ny zavatra mety ho hitantsika karazany maro hafa amin'ny mpivarotra trondro izay tsy nohanina raha tsy taona vitsivitsy lasa izay.
Fanesorana ny harena an-kibon'ny tany
Manana refy ny planetantsika ary a habetsahana ny enti-manana voafaritra sy voafetra. Ny fomba fampiasana ny loharanom-bola, mody tsy raharahiany fa ho reraka izy ireo, ankoatr'izay tsy mandray andraikitra, dia tsy rariny mivantana amin'ny taranaka ho avy.
Raha vao esorina ny mineraly avy amin'ny tany dia tsy azo esorina intsony. Noho izany ny fampiasana tompon'andraikitra fa vita dia zava-dehibe tokoa ary ny toerana misy lojika ihany amin'ny ho avy dia ny fametrahana rafitra iray an'ny Toe-karena tena boribory amin'ny fomba izay tsy laniana ireo loharano ireo fa ampiasaina.
Midika izany fa tsy ny zavatra nohaverina simbaina fotsiny, fa rehefa eo koa izy ireo famolavolana sy fanamboarana Efa raisina an-tsaina fa aorian'ny fampiasana ireo enti-manana tsy azo havaozina ireo dia tsy maintsy azo ampiasaina indray.
An-tànantsika ny hoavin'izao tontolo izao
Ny marina dia na eo aza ireo fanamby ara-tontolo iainana toa tsy azo tanterahina ireo ary na eo aza ireo fandrahonana apokaliptika ireo dia manana isika ankehitriny fitaovana bebe kokoa noho ny hatramin'izay handresena ireo fanamby rehetra ireo.
Ny fahalalana fa misy amin'izao fotoana izao ny zava-mitranga amintsika, ny antony manjo antsika ary ny fomba fitadiavana vahaolana lehibe noho ny hatramin'izay.
Eo am-pelatanantsika ny fitaovana hampiakarana a maodely fampandrosoana hafa. Angamba noho io antony io sy noho ny karazana fanesoana masina ataonay dia isika no mila miatrika fanamby lehibe mbola tsy natrehan'ny zanak'olombelona hatrizay:
Fiovan'ny toetr'andro naterak'i fiakaran'ny hafanana vokatry ny fiezahantsika namoaka diôzida karbonika fôsily tamin'ny fomba mampidi-doza tato anatin'ny 150 taona lasa.
Ny vaovao tsara dia isika no taranaka voalohany amin'ny fananantsika ny fitaovana hampiatoana izany fandrahonana izany ary hanitsiana ny fomba fipetrahantsika an'ity planeta ity mankany amin'ny iray izay manalavitra ny ny vokany ratsy indrindra.
Ny ratsy dia mety ho isika no farany amin'ny fahaizana mampihatra azy miaraka amin'ny antoka fahombiazana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Fanamby ara-tontolo iainana ho an'ny 2017
Fitsarana efa ho 30 no miandry ny fanapahana ny angovo azo havaozina ao amin'ny ICSID